Ch 1 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 1 Luke
1:1 Koa satria, tokoa, Maro no niezaka nandahatra tantara ny amin'ny zavatra izay efa vita eto amintsika,
1:2 toy ny efa natolotro ireo amintsika izay hatramin'ny voalohany nahita izany sady mpitory ny teny,
1:3 ka sitraky tamiko koa, amim-pahavitrihana rehefa nanaraka ny zava-drehetra hatrany am-piandohana, mba hanoratra aminareo, amin'ny fomba milamina, ry Teofilo tsara indrindra,
1:4 mba hahazoany mahalala ny marina ireo teny izay efa nampianarina.
1:5 Nisy, tamin'ny andron'i Heroda, mpanjakan'i Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, ny fizarana Abia, ary ny vadiny dia avy amin'ny zanakavavin'ny Arona, ary Elizabeta no anarany.
1:6 Ankehitriny dia samy marina eo anatrehan'Andriamanitra, nihanitombo ny didy rehetra sy ny fanamarinana ny amin'ny Tompo tsy misy tsiny.
1:7 Ary tsy nanan-janaka, fa momba Elizabeta, ary izy roa lahy efa lasa mandroso fahanterana.
1:8 Avy eo dia nitranga fa, rehefa nampihatra ny fisoronana eo anatrehan'Andriamanitra, ao ny lamin 'ny fizarana,
1:9 araka ny fanao amin'ny fisoronana, filokana izany fa hanolotra ditin-kazo manitra, niditra tao amin'ny tempolin'ny Tompo.
1:10 Ary ny manontolo ny olona maro be avy nivavaka ivelany, tamin'ny ora ny ditin-kazo manitra.
1:11 Avy eo dia niseho taminy ny anjelin'ny Tompo, nitsangana teo amin'ny ankavanan'ny alitara fandoroana ny ditin-kazo manitra.
1:12 Ary rehefa nahita azy, Zakaria i Taitra, ary raiki-tahotra ny azy.
1:13 Fa hoy ilay anjely taminy: "Aza matahotra, Zakaria, noho ny vavaka efa re, ary Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy ho anao. Ary ianao no hataonao anarany John.
1:14 Ary hisy fifaliana sy firavoravoana ho anareo, ary maro no hifaly amin'ny nahaterahany.
1:15 Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo, ary tsy hisotro divay na toaka, dia ho feno ny Fanahy Masina, na dia hatrany an-kibon-dreniny.
1:16 Ary dia hiova finoana maro amin'ny zanak'Israely ho an'i Jehovah Andriamaniny.
1:17 Ary izy handeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia, ka mba hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanany, ary ny tsy tena nino ny fahamalinana ny marina, mba hiomana ho amin'ny Tompo ho vita ny olona. "
1:18 Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely: "Ahoana no fantatro izany? Fa Izaho no be taona, ary ny vadiko dia nandroso taona. "
1:19 Ary ho setrin'ny, ny Anjely hoy izy taminy:: "Izaho no Gabriela, izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahina aho hiteny aminao, ary ny hanambara ireo zavatra ireo aminareo.
1:20 Ary indro, dia ho moana sy tsy afa-niteny, mandra-pihavin'ny andro izay izany zavatra izany dia ho, satria tsy nino ny teniko, izay ho tanteraka amin'ny fotoana. "
1:21 Ary ny olona dia niandry an'i Zakaria. Ary izy ireo nanontany tena hoe nahoana izy no ho naharitra ela tao amin'ny tempoly.
1:22 Avy eo, rehefa tonga avy, dia tsy afaka niteny tamin'izy ireo. Ary dia takatr'izy ireo fa efa nahita fahitana tao amin'ny tempoly. Ary izy nanao baikon'ny moana taminy, fa mbola moana.
1:23 Ary nony fa, rehefa tapitra ny andro dia vita ny anjara fanompoany, dia lasa nankany an-tranony.
1:24 Avy eo, Rehefa afaka izany andro, nitoe-jaza Elizabeta vadiny, dia niery dimy volana, nanao hoe::
1:25 "Fa ny Tompo nanao izany ho ahy, tamin 'ny fotoana, rehefa nanapa-kevitra ny hitondra tondromaso ahy amin'ny olona. "
1:26 Avy eo, tamin'ny fahenim-bolana, ny anjely Gabriela nirahin'Andriamanitra, ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta,
1:27 ho any amin'ny virijina voafofo ho lehilahy atao hoe Josefa, tao an-tranon'i Davida; ary ny anaran'ny virijina dia Maria ny.
1:28 Ary, tamin'izy niditra, ny Anjely nanao taminy hoe:: "Arahaba, feno fahasoavana. Ny Tompo no momba anao. Sambatra ianao amin'ny vehivavy. "
1:29 Ary nony efa nandre izany, dia sahiran-tsaina izy noho ny teniny, ary nandinika izay karazana fiarahabana izany mety ho.
1:30 Ary ny Anjely nanao taminy hoe:: "Aza matahotra, Mary, fa efa mahita fitia tamin'Andriamanitra.
1:31 Indro, hanan'anaka ianao ao an-kibonao, ary ho entinareo zazalahy, ary hiantso ny anarany: JESOSY.
1:32 Izy ho lehibe, ary dia hatao hoe Zanaky ny Avo Indrindra, ary Jehovah Andriamanitra hanome Azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Ary izy no nanjaka tamin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay.
1:33 Ary ny fanjakany no tsy ho tapitra. "
1:34 Ary hoy Maria tamin'ilay anjely, "Ahoana no hahatanteraka izany atao, satria tsy fantatro ny olona?"
1:35 Ary ho setrin'ny, ny Anjely nanao taminy hoe:: "Ny Fanahy Masina, dia handalo anareo, ary ny herin'ny Avo Indrindra hanaloka anao. Ary noho izany koa, ny Iray Masina izay ho teraka aminareo no hatao hoe ny Zanak'Andriamanitra.
1:36 Ary indro, ny havanay Elizabeth manana ny tenany koa dia nanan-anaka zazalahy, amin'ny efa antitra aza. Ary izao efa mandray enina ho azy izay atao hoe momba.
1:37 Fa tsy hisy tsy ho hainareo teny amin'Andriamanitra. "
1:38 Dia hoy Maria: "Indro, Izaho no ankizivavin'ny Tompo. Aoka izany ho tanteraka amiko araka ny teninao. "Ary ny anjely nandao azy.
1:39 Ary tamin'izany andro izany, Mary, eny, nifoha, nandeha haingana any amin'ny tany havoana, ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda.
1:40 Dia niditra tao an-tranon'i Zakaria, ary niarahaba an'i Elizabeta.
1:41 Ary nony fa, tahaka Elizabeth nandre ny fiarahaban'i Maria, nibitaka ny zaza tao an-kibony, ary Elizabeth dia feno ny Fanahy Masina.
1:42 Dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe:: "Sambatra ianao amin'ny vehivavy, ary voatahy ny hateraky ny kibonao.
1:43 Ary inona no mampanahy ahy, ka ny renin'ny Tompoko ho tonga amiko?
1:44 Fa, indro, toy ny feon 'ny fiarahabana tonga ny sofiny, ny zaza ao an-kiboko dia nibitaka noho ny hafaliana.
1:45 Ary sambatra ianao izay nino, fa ny zavatra izay efa nolazaiko anareo avy tamin'i Jehovah ho tanteraka. "
1:46 Ary hoy Maria: "Ny foko mankalaza ny Tompo.
1:47 Ary ny fanahiko noho ny hafaliana mitsambikina tamin'Andriamanitra, Mpamonjy ahy.
1:48 Fa efa nankasitraka ny fanetren-tena ny ankizivaviny. Fa, indro, hatramin 'izao fotoana, hataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho.
1:49 Fa izay lehibe efa nanao zavatra lehibe ho ahy, ary masina ny anarany.
1:50 Ary ny famindram-pony dia hatramin'ny taranaka fara ny taranaka ho an'ireo izay matahotra azy.
1:51 Efa vita asa mahery tamin'ny sandriny. Efa nampiely ny mpirehareha ao ny fanirian'ny fony.
1:52 Efa nesorina ny mahery amin'ny seza, Ary efa nanandratra ny manetry tena.
1:53 Efa feno ny zava-tsoa noana, ary ny manan-karena dia naniraka maina.
1:54 Efa nakarina ny mpanompony Israely, Tsarovy ny famindram-pony,
1:55 araka izay voalazany tamin'ny razantsika: tamin'i Abrahama sy ny taranany mandrakizay. "
1:56 Ary Maria nitoetra teo aminy nandritra ny telo volana. Dia nody tany an-tranony.
1:57 Ary ny andro ho an'ny Elizabeth mba hiteraka tonga, ary niteraka zazalahy.
1:58 Ary ny mpiara-monina sy ny havany nandre fa ny Tompo no lehibe tokoa ny famindram-po aminy, koa araka izany ny niarahaba azy.
1:59 Ary nony fa, amin'ny andro fahavalo, dia tonga hamora ny zaza, ary niantso azy tamin'ny anaran'ny Rainy, Zakaria.
1:60 Ary ho setrin'ny, ny reniny:: "Tsy izao no izy. Fa tsy, dia hatao hoe Jaona izy. "
1:61 Ary izy nanao taminy hoe:, "Fa tsy misy eo amin'ny havanao izay antsoina amin'ny anarana izany."
1:62 Avy eo dia nanao famantarana tamin'ny rainy, toy ny zavatra tiany hatao hoe azy.
1:63 Ary nangataka ny fanoratana takelaka, izy nanoratra, nanao hoe:: "Jaona no anarany." Dia gaga avokoa izy rehetra.
1:64 Avy eo, indray mandeha, nisokatra ny vavany, ary ny lelany hiavian'ny, ka niteny, fitahiana Andriamanitra.
1:65 Ary raiki-tahotra ny mpiara-monina rehetra. Ary izany teny rehetra izany natao fantatra eran'i amin'ny tany havoan'i Jodia.
1:66 Ary ireo rehetra izay nandre dia voatahiry izany ao am-pony, nanao hoe:: "Ahoana no hevitrareo ity zazalahy ity dia ho?"Ary tokoa, ny tanan'ny Tompo nomba azy.
1:67 Ary ny rainy Zakaria dia feno ny Fanahy Masina. Dia naminany, nanao hoe::
1:68 "Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,. Fa namangy sy efa nanao ny fanavotana ny vahoakany.
1:69 Ary nanangana tandro-pamonjena ho antsika, ao an-tranon'i Davida mpanompony,
1:70 araka izay nampilazainy ny vavan 'ny mpaminaniny masina, izay hatramin'ny fahagola lasa:
1:71 famonjena antsika amin'ny fahavalontsika, sy amin'ny tànan'izay rehetra mankahala antsika,
1:72 hanatanterahana famindram-po amin'ny razantsika, ary ny hahatsiaro masina testamenta,
1:73 ny fianianana, izay nianianany tamin'i Abrahama, ny ray, mba homeny antsika,
1:74 amin'izay mba, rehefa afaka amin'ny tanan'ny fahavalonay, izahay hanompo Azy tsy amin-tahotra,
1:75 amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany, mandritra ny andro rehetra.
1:76 Ary ianao, ankizy, dia hatao hoe mpaminanin'ny Avo Indrindra. Fa handeha eo anatrehan'ny tavan'ny Tompo: mba hanomana ny lalany,
1:77 mba hanome ny fahalalam-pamonjena ho an'ny vahoakany ho famelana ny fahotany,
1:78 ny alalan 'ny fon'ny ny famindram-pon'i Andriamanitra, izay, nidina avy any ambony, Izy no nitsidika anay,
1:79 mba hanazava ireo izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana, ary hitarika ny tongotro eo amin'ny làlam-piadanana. "
1:80 Ary rehefa lehibe ny zaza, Ary dia nitombo hery tamin'ny fanahy. Ary izy tany an-efitra, mandra-pahatongan'ny andro fanehoana ho an'ny Isiraely.